Ogaden News Agency (ONA) – Uganda oo Qaar Kamid Ah Ciidankeeda Kala Baxday Soomaaliya.
Uganda oo Qaar Kamid Ah Ciidankeeda Kala Baxday Soomaaliya.
Posted by Dayr	/ December 7, 2017
Madaxda militariga dalka Uganda ayaa sheegay in ay bilaabeen in ciidanka ay kala baxaan Soomaaliya, waxayna ku billaabeen 281 askeri oo ka tirsanaa howlgalka Midowga Afrika.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah qorshaha Qaramada Midoobey ee lagu dhimayo tirada ciidamada Midowga Afrika ka joogo Soomaaliya. 1,000 ayaa illaa dhammaadkan sanadka laga saari doonaa dalka oo hadda ka soo kabsanaya colaadda.
Soomaaliya waxaa ku sugan in ka badan 22 kun oo askeri oo qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM). Uganda, oo ah dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ciidamo geeyay sannadkii 2007-dii, waa waddanka bixiyay tirada askarta ugu badan oo gaaraya illaa 6,000.
Kenya, Burundi, Jibuuti iyo Itoobiya ayaa sidoo kale la filayaa in ay dhimaan tirada ciidamadooda illaa dhammaadka bishan.
In hadda 1,000 askeri laga saaro Soomaaliya waxaa suuragal ah in aysan saameyn wayn ku yeelanin howlaha amniga, balse dowladaha taageera AMISOM waxay doonayaan in ay arkaan militariga iyo booliska Soomaaliya oo sugidda arrimaha nabadgelyada la wareegaya.
Dalalka Afrika ee ciidamada geeyay Soomaaliya waxaa lagu amaanay in ay dalka ku soo celiyeen qeyb ka mid ah xasilloonida in kastoo shaqadooda ay ragaadisay musuqmaasuq ay ku keceen qaar ka mid ah ciidamadooda iyo in aysan guul rasmi ah weli gaarin. Dadaalka lagu xoojinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa weli socda.
Mareykanka ayaa sare u qaaday tirada ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya oo la sheegay in ay gaarayaan illaa 500, waxayna badiyeen duqeymaha ay ku xoojinayaan wada shaqeynta ay la leeyihiin militariga Soomaaliya. Laakiin in laga adkaado ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in aysan noqon doonin mid fudud.